Qeybta 1: Waa maxay sababta loogu badalo m2ts in MOV on Mac
Qeybta 3: Isticmaal free video Converter
Qeybta 4: Isticmaal Converter online lacag la'aan ah
Part1: Waa maxay sababta loogu badalo m2ts in MOV on Mac
Ka hor inta aan qoto dheer dhexgalin mawduuca marka hore waxa aad u muhiim ah in la caddeeyo in waxa qaab MOV yahay. MOV waa qaab multimedia file in loo isticmaalo on Mac. Hal mar u ahaa qaabka kaliya ee Mac ah iyo dadka isticmaala sabab la mid ah loo isticmaalo si loogu badalo files si ay kaliya qaab MOV in la hubiyo in waxyaabaha ku jira faylka waa la arki on nidaamka. Iyadoo dhererka waqtiga ay qaabab kale sida AVI , AMV, FLV iyo warbaahinta dhabta ah ayaa lagu soo bandhigay tartan adag qaab iyo hadda dadka isticmaala ay isticmaalaan qaabab ku xusan si aad u hubiso in files waxaa lagu ciyaaray aan arin kasta. Hadda su'aashu waxay tahay in sababta qaab waa in loo doortay Samaynta videos ka dibna iyaga arkaysid. Waxaa jira dhowr sababood oo muhiim ah in la hubiyo in qaab MOV waxaa loo isticmaalaa si aad u eegto waxyaabaha ku arrintan la xiriira iyo qaar ka mid ah ayaa la sheegay hoose si aad u iftiiminaya users ee arrintan la xiriira si aad u hubiso in ay ma aha oo kaliya la ogaado faa'iidooyinka iyo la xiriira ee terminologies laakiin sidoo kale lagu fulinayo hab ugu fiican si loo hubiyo in isticmaalka ugu wanaagsan ee technology la sameeyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in hal mar, kuwaas oo faa'iidooyin yihiin ka dibna waxa uu noqday fududahay user si loo hubiyo in qaab MOV waxaa loo isticmaalaa hab ugu fiican. Labada sababta ugu weyn ee oo qaab MOV loo arko waxaa lagu sharaxayaa sida soo socota:
1. qaab MOV waxaa taageeraya tiro ka mid ah ciyaartoyda iyo dhufto ee adduunka oo dhan iyo marka la barbar dhigo qaab m2ts waa iftiin miisaanka iyo qaadataa meel yar. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in ugu fiican in la siiyo nidaamka iyo barnaamijyada la xiriira in la rakibo iyo sidoo kale waa ay fududahay in la geliyo. Qaab MOV on dhan waa qaabka ugu wanaagsan ee multimedia oo ugu horay oo uu soo arkaa in dadka isticmaala ee adduunka oo dhan. In kastoo oo ah qaabab kale ayaa sidoo kale la soo saaray, laakiin faa'iidooyinka dhaqanka ee qaab MOV aan la dhaafay karaa in si kasta oo ay sabab u tahay xaqiiqada ah in user of qaab MOV sii wadi doonaa in ay isticmaalaan oo aanay ku talaabsan doonaa in qaabab kale oo dhan.
2. labaad iyo ceeryaamo faa'iido muhiim ah oo la isticmaalayo qaab MOV la xiriira horumarinta si ay u kordhiso qaar ka mid ah luuqadda farsamada waxaa loo isticmaali doonaa in la hubiyo in arrinta la fahamsan yahay ka dibna ku terminologies la xiriira waxaa laga dalbadaa habka ugu fiican. Faa'iidada labaad ee qaab MOV waa in ay isku dhejiyaa barnaamijyo kale oo internetka oo la dhisay. Inta badan ku dhiirigelinayaan in uu horumariyo oo internetka hab ugu wanaagsan ee loo hubiyo in qaab MOV waxaa gundhig iyo user helo natiijada ugu fiican ee sida fiican u. Qaab MOV waa qaab fudud sidii loo sharxay ka hor si fudud laftiisa ku haboon webpage wax galay oo wuxuu hubiyaa in xataa xaaladan waafaqid madal cross waxaa lagu bixiyaa hab ugu fiican.
Sidoo kale waa mid ka mid ah convertors ugu fiican oo la hubiyo in qaabka m2ts waa diinta MOV si aad u hesho arrinta la xalin markii waynay oo dhan. Ka dib waa hab ah in uu qofku waa in ay hubiyaan in ay soo socda arrintan la xiriira si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican sameeyaan. Tani waxa ay tahay in loo gefo aan tallaabo kasta si loo hubiyo in natiijada kama dambaysta ah waa in line shuruudaha user:
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in URL http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/guide.html waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi oo ku rakiban iyo ka dib marka la sameeyo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in barnaamijka la bilaabay. Kadib markii ay button file Add in loo arki karaa dhexe waa in saxaafadeed si loo hubiyo in files la doonayo waxaa la keeno barnaamijka:
2. arrow double waa in la double riixi si ay u hubiyaan in qaab saarka la furay iyo qaabka la doonayo la doorto iyo waxa ay sidoo kale hubineysaa in tayada, dhawaaqa iyo koobin kale waxaa lagu bedelay habeeyay sida baahida iyo rabitaanka ah user. Doorashada qaabka saxda ah iyo sidoo kale wax soo saarka hubiyaa in user helo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira:
3. Xagga sare ee daaqadda jiro button diinta in ay tahay in la sii adkeeyey markii user waa hubiyo in goobaha wax soo saarka waafaqsan yihiin shuruudaha iyo wax soo saarka ka mid ah wuxuu noqon doonaa sida user ay u baahan tahay ah. Waxa kale oo ay ka dhigi doonaa in la hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican iyo habka halkan sidoo dhammaatay,
Part3: Isticmaal video Converter oo lacag la'aan ah
Waa mid ka mid ah hababka ugu fiican si ay u hubiyaan in qaab ah waxaa loo baddalaa. Si loo hubiyo in la isticmaalo sida ugu fiican ee fikrad lagu sameeyo waxaa lagula talinayaa in ay isticmaalaan streamclip mpeg taa oo aan kaliya oo lacag la'aan ah, laakiin sidoo kale waa adeeg gobolka of farshaxanka:
1. dhan DVD waa in la soo guuriyeen in drive adag ee nidaamka:
2. user ayaa markaas u baahan yahay inuu soo bixi il clip u Mac ka URL http://download.cnet.com/MPEG-Streamclip/3000-2140_4-51380.html oo ku xidh. Marka la sameeyo barnaamij waa in la bilaabay:
3. Jidka in markaas waa in la raaco waa File> Open Files si aad u hesho DVD lagu badbaadiyey drive ee bilowga hanaanka gal:
4. Barnaamijka waxaa si toos ah u dooran doona faylasha ay u baahan tahay in arrintan la xiriira:
5. user ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in la dhoofiyo si ay mar deg deg ah waxaa la soo xulay si ay u helaan tayada ugu fiican:
6. goobaha wax soo saarka markaas waa in loo doortay in la sameeyo wax soo saarka si dhab ah xiddig:
7. button ayaa movie Samee markaas waa in la riixi inuu ku soo bilowdo diinta iyo ku dhameysan nidaamka:
Part4: Isticmaal Converter online lacag la'aan ah
The convertor ugu fiican online arrintan la xiriira waxa uu ku yaalaa URL http://www.online-convert.com/ iyo geeddi-socodka waa sida soo socota:
1. user wuxuu u baahan yahay si ay u helaan bogga ugu weyn ee website-ka:
2. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in ka yar convertor video ka badalo si loo MOV la doorto iyo button GO la adkeeyey,
3. Bogga xiga file waa in la uploaded iyo goobaha wax soo saarka, waa in loo soo xulay si ay u hubiyaan in habka horumarka:
4. Isticmaalka markaas u baahan yahay inuu riix badhanka file diinta si loo hubiyo in nidaamka halkan hasa
> Resource > Beddelaan 3> siyaabo si loogu badalo m2ts in MOV on Mac